Sharia in Action: Christians Arrested in Ethiopia for "Crimes Against Islam"
အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မွတ်စလင် ပညာရှင်များ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
Sharia in action in Egypt: Christian teacher convicted of blasphemy
မလေးရှားဖြစ်ရပ်သည် မြန်မာ့အကြမ်းဖက်မှု ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ တင်မောင်သန်းပြော
Six Healthy Green Foods for Weight Loss
မလေးမှာ အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကို ရှုတ်ချပါတယ်
BBC News - The gay people against gay marriage
အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းချင်ရင်တော့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရဲရမယ်…..
Documentary Of A Sweet-Hearted Nenek.. ^_^ May Allah Bless Her Always..Ameen..
EU Parliament to issue resolution on Rohinga Muslims of Myanmar
Posted: 12 Jun 2013 06:57 AM PDT
After I quit my office job to start doing freelance work at home in mid 2010, I had more time for my voluntary work. By then I was already the chairperson for Buddies. With request coming from the Ipoh HIV clinic asking if we could send volunteers more frequently to the clinic, I figured it was doable if I myself was willing to volunteer more frequently. I didn't want to force the other volunteers to do the same, so what I did was to divide the available volunteers into pairs of 2, and we came up with3teams (not including myself). These3pairs would be on duty as previously, taking turns on the 1st and 3rd Wednesdays of each month, while I'd take the 2nd and 4th Wednesdays, either alone, or with any available trainee volunteers.
So we now have volunteers almost every Wednesdays at HRPB. Almost? Well yes, if there are 5th Wednesdays in any month, we wouldn't have any volunteers attending the clinic duty.
For an NGO with only volunteers, without havingasingle full time staff, I think that's quite an achievement.
Mind you, there are no blasphemy laws in Ethiopia, but then again, there are no blasphemy laws in the US -- but one youtube filmmaker is rotting in prison forayoutube film offensive to Muslims.
Two Christians Unlawfully Arrested in Ethiopia for "Crimes Against Islam" Persecution.org June 12, 2013. 6/10/2013 Washington D.C. (International Christian Concern) – International Christian Concern (ICC) has learned that two Christian men were arrested in Ethiopia by local police influenced by radical Muslims. In separate incidents, these men were detained by local police for what authorities are calling "crimes against Islam," even though no such crime exists in Ethiopia's penal code.
In late March, Alemlayehu Legese was arrested by local police in Dodola,acity located 180 miles south of Addis Ababa, after admitting to owning literature that "discussed the history of Islam fromaChristian perspective." Legese,astudent at Dodola Mekane Yesus Bible School, dropped off the literature atacopy shop whereaMuslim employee who felt Christians should not be allowed to read about the history of Islam contacted police. "The police officers treated this incident as if it wereaterrorist attack," an ICC representative in Ethiopia said.
Fearful the investigation could lead to widespread violence, the local church advised Legese to report to the police and admit to owning the literature. Upon reporting to the police, Legese was arrested and imprisoned. When ICC asked why Legese was being imprisoned without being formally charged, the local police commander said they were detaining Legese to "cool down the anger of local Muslims." It has been over two months since Legese was imprisoned, formal charges are yet to be laid against him.
Continue reading "Sharia in Action: Christians Arrested in Ethiopia for "Crimes Against Islam"" »
Posted: 12 Jun 2013 06:04 AM PDT
ဇွန်လ ၁၂၊ ၂၀၁၃ M-Media သတင်း – ဆူးထက်
ရန်ကုန် ။ ။ ညီညွှတ်ရေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ကွန်ရက်ပေါင်းစု (Unity For Peace Networks) မှ စီစဉ် ကျင်းပသော အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မွတ်စ်လင်မ်များအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် (၁၀)နာရီမှ (၁၂)နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့ YMCA ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Unity For Peace Networks Organizer မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးကျော်ဝင်းက " နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်သူ လူမျိုးပေါင်းများစွာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံရသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ဘာသာဝင်မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများနှင့် စွပ်စွဲချက်များ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြုံစဖူး၊ နိုင်ငံနဲ့ အ၀ှမ်း ပြန့်ပွားနေရုံမက အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သာသနိက အဆောက်အအုံတွေဟာ နိုင်ငံနှင့် အ၀ှမ်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ခံနေရပါတယ်။ ဘယ်ရှူဒေါင့်က ကြည့်ကြည့် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေဟာ တိုင်းကျိုးပြည်ပြုလုပ်ရပ်တွေ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တိုက်ရိုက်အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်တွေဟာ အထင်မှား၊ အမြင်မှားမှုတွေ၊ အမုန်းတရားတွေကနေ မြစ်ဖျားခံလားခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေကို အစ္စလာမ် သာသနာ့ပညာရှင် အသီးသီးက မိမိတို့ တတ်စွမ်းသရွေ့ တစ်ဦးချင်း ဖြေရှင်းခဲ့၊ ဖြေရှင်းနေဆဲပါ။ တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်း ဖြေရှင်းနေတာထက်စာရင် အဓိကကျတဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပညာရှင်တွေက တညီတညွှတ်တည်း၊ တစ်နေရာတည်း၊ တစ်ချိန်တည်း မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြီး မီဒီယာတွေ အနေနဲ့လည်း ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အများပြည်သူထံ အရောက် ပို့ပေးနိုင်ရင်ဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး၊နိုင်ငံသာယာတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ လူမှုကွန်ရက်တွေက ယုံကြည်တဲ့ အတွက် ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် " ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများအား မွတ်စ်လင်မ် ပညာရှင်များဖြစ်သော အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ ဟာဖိဇ် မွဖ်သီ နူးရ် မုဟမ္မဒ် ဦးကိုလေး၊ အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ ဟာဖိဇ် ကာရီ မွဖ်သီဂျအ်ဖရ် ဦးတင်မြင့်၊ ဟွတ်ဂ်ျတွလ်အစ္စလာမ် အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ အင်နာယသ်ဟူစိန် ဦးခင်မောင်ဦး၊ အလ်ဟာဂ်ျ ခလီဖွှာ ဦးအေးလွင် (M.Sc.,F(1)၊ အလ်ဟာဂ်ျ မွဖ်သီဒေါက်တာမြင့်သိန်း(စာရေးဆရာ ငြိမ်းချမ်းလုလင်)၊ မွဖ်သီအဗွလ်ဟစန် ဦးတင်မြင့်၊ အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ အိုမရ်မြင့်နိုင်၊ မွဖ်သီ ကာရီ ဂျလားလ်အဟ်မဒ် ဦးအောင်စိုး (B.A) တို့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာနှင့် မွတ်စလင်မ်များအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မွတ်စ်စလင်မ် ပညာရှင်ကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကွန်ရက်ပေါင်းစုမှ ရှင်းလင်းကြေညာချက်အား UPN မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုရဲလှမှ ဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းမှ အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် " ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ UPN Networks မှ ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ကျွန်တော်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊ စာနယ်ဇင်းတစ်မား တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဧည်သည်အဖြစ် တက်ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ကြုံရတဲ့ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံမှာ မတည်ငြိမ်မှု၊ အေးချမ်းမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်က စပြီး တစတစ မိတ္ထီလာ၊ လာရှိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ဆိုရင် အနီးဆုံးနေရာတွေ အထိ ရောက်လာပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်း မကြာခဏဆိုသလို ဟိုနားက အော်သွား၊ ဒီနားက အော်သွားနဲ့ ကျီးလန့်ဆန်စား အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အတွက် ကျီးလန့်ဆာဆာ ဖြစ်ရတာပါ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက လူနည်းစုတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက လူများစု ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်တဲ့ ညက ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တော်တော်များများ တစ်ညလုံး မအိပ်နိုင်ကြပဲနဲ့ တယ်လီဖုန်း အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာများကို တဆင့် အကြောင်းကြားပေးကြပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် နှုတ်၏ စောင်မခြင်းနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က နှုတ်၏ စောင်မခြင်းနဲ့ပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို အတိအကျ ပြောနိုင်ပေမယ့်လို့ လက်၏ စောင်မခြင်းနဲ့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ အင်မတန် ၀မ်းနည်း ကြေကွဲရပါတယ်။ မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းကို မီးတင်ရှို့နေပြီဆိုတာ သိတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဦးအေးလွင်ဆီကို ကျွန်တော်အင်မတန် စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကလည်း ဆက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ၊ တပ်က ထိန်းသိမ်းထားပါတယ် ဟု အဲလိုပဲ အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ တကယ်တကယ့် ကြတော့ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ အများကြီး သေကြေပျက်ဆီးကြပြီးတော့ အချို့လည်း အခုထက်ထိ ပျောက်ဆုံးနေဆဲပါ။ အင်မတန် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။ အခုလည်း ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ အိမ်ပြန်ခွင့် မရပါဘူး။ တည်ငြိမ်မှုကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းထားသလို ရှိနေပါတယ်။
ဂျာနယ်အချို့နဲ့ သတင်းစာ အပါအ၀င် မီဒီယာတွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ပတ်သပ်ပြီး အင်မတန် လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာကို အများကြီး ကြုံရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော် မီဒီယာ သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်ရောက်လာတဲ့ မီဒီယာက ပုဂ္ဂိုလ် များကို အထူးမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲဟာ သာမာန်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲနဲ့ မတူပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို အများကြီး အထောက်အကူ ပြုမယ့် ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့က ပုဂ္ဂိုလ်က တစ်ချက်ခြင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့ (၁၀)ချက်ကို ပြန်ပြီးတော့ ကိုယ်ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာမှာ ပြန်ပြီးတော့ တင်ပြတဲ့ အခါမှာ တိတိကျကျလေးတင်ပြပေးပါလို့ UNP ကိုယ်စား၊ မီဒီယာ သမား တစ်ယောက်ကိုယ်စား၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ကိုယ်စား ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တိတိကျကျ မရေးလို့ ကိုယ်လိုချင်တာကို ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ ထည့်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီနေ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေချင်လို့ လုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲဟာ မတည်ငြိမ်အောင် ဖန်တီးသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်" ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မီဒီယာများမှ မေးမြန်းချက်များကို အထက်ပါ ဆရာများမှ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
News Watch သတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ကိုမင်းဗညားက " ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများမှာ မွတ်စ်လင်မ်များက ထိပ်တိုက်တွေ့၍ ဖြစ်ရကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်များကစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာများက ပြန်ခုခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ် ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် အောက်ခြေအထိ ဆင်း၍ အကြမ်းဖက်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် အစီအစဉ်ရှိလား မေးခွန်းကို အလ်ဟာဂ်ျခလီဖွှာ ဦးအေးလွင်က ယခုကဲ့သို့ ဖြေကြားခဲ့သည်။
" အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အားလုံး ကိုယ်စား ဖြေကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူဟူသည်ရှိနေသရွေ့လူမှု ဆက်ဆံရေးအရ အမှားအယွင်းရှိကြောင်း၊ လူမှုပြဿနာကို ဘာသာရေး ခေါင်းစဉ်တပ်၍ မရကြောင်း၊ လောကရှိ လူများတွင် ကောင်းသူရှိသလို ဆိုးသူလည်းရှိကြောင်း၊ ဘာသာတရား အသီးသီးကလည်း အကောင်းကိုသာ ညွှန်ပြထားကြောင်း၊ ဘာသာတရား မည်မျှပင် ကောင်းစေကာမူ မပြုကျင့်သူများရှိကြောင်း၊ မကောင်းမှု ပြုသူသည် ဘာသာတရားကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း၊ မကောင်းမှု ကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကို မဆို ရှုံ့ချပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကို ခေါင်းစဉ်တပ်၍ ပြောခြင်းသည် ရိုးသားမှု မရှိကြောင်း၊ အပြစ်ကျူးလွန်သူကိုသာ ပြောသင့်ကြောင်း" ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ မီဒီယာ (၄၂)ခုမှ လူဦးရေ (၆၀)ယောက်ခန့်၊ ဧည်သည့်တော် (၁၆၅)ယောက် စုစုပေါင်း ၂၂၀ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted: 12 Jun 2013 09:22 AM PDT
Posted: 12 Jun 2013 03:48 AM PDT
The video below – filmed at the Global Forum for Combating Antisemitism which was recently held in Jerusalem – features interviews with Kasim Hafeez from the UK and Rev. Majed El Shafie who now lives in Canada after having been forced to leave his native Egypt in 1998 due to religious persecution. Hat tip: EOZ
Posted: 12 Jun 2013 03:45 AM PDT
This can also happen in Malaysia if Sharia is adopted by the Constitution as the Non Believers will be considered Dhimmis.
As Egypt begins to implement Sharia, more and more Christians will be victimized in this way, just as they are in Pakistan. "Egyptian Christian teacher convicted of blasphemy," by Haggag Salama for the Associated Press, June 11
LUXOR, Egypt (AP) — An Egyptian court has convictedaCoptic Christian teacher of blasphemy but didn't hand downaprison sentence and only imposedafine on her. The court on Tuesday ruled that elementary schoolteacher Dimyana Abdel-Nour had insulted Islam. It ordered that she payafine of 100,000 Egyptian pounds ($14,000). Abdel-Nour was not in the courtroom for the verdict. The case in the ancient southern city of Luxor began when three parents said their 10-year-olds complained at home, saying their teacher showed disgust when she spoke of Islam in class. Angry Islamists protested the verdict outside the courthouse.
They wanted her in prison -- or dead.
Egypt has witnessedasurge in blasphemy charges in recent months, widely seen asareflection of the growing power of Islamists. Blasphemy becameacriminal offense under Egypt's new, Islamist-backed constitution. Hat tip: Jihad Watch
Posted: 12 Jun 2013 04:53 AM PDT
Posted: 12 Jun 2013 01:42 AM PDT
မြန်မာနိင်ငံတွင်ယမန်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တောင်ကုတ်လူသတ်ပွဲ၊ ရိုပာင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ကာ တိုက်ခိုက် ဖိနှိပ်မှု၊ မိတ္ထိလာမြို့တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဘာသာရေးကျောင်းသား ၃၂ ဦး နှင့်မွတ်စ်လင်မ် ၄၀ နီးပါးအား သတ်ဖြတ်ကာ မွတ်စ်လင်မ် အိမ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှု အပါအ၀င် ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ဥက္ကံမြို့၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ နတ်တလင်းမြို့၊ အုတ်ဖိုမြို့၊ မင်းလှမြို့၊ ပုတီးကုန်းမြို့ စသည့်မြို့များနှင့် အဆိုပါဒေသများ အတွင်းမှ ရွာများ၊နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့တို့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်မှုများကို ဗုဒ္ဓဘာသာရေး အစွန်းရောက် ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၉၆၉ ဂိုဏ်းနှင့် ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၃
မလေးရှားတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ဖြစ်ရပ်များသည် မြန်မာနိင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် အလားတူ ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ တင်မောင်သန်း (သင့်ဘ၀ အယ်ဒီတာပောာင်း) ကပြောသည်။
"ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ အတူတူပဲလေ။ ဒီမှာ အကြမ်းဖက်ရင် ပာိုမှာလည်း အကြမ်းဖက်မှာပဲ၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ လူတွေရဲ့မိုက်မဲခြင်းဆိုတာ ရှိတယ်လေ" ပာု ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းက ပြောသည်။ မလေးရောက် မြန်မာနိင်ငံသား ဆယ်ဂဏန်း ၀န်းကျင်ခန့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံ နေရမှုဖြစ်ပွားနေသည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး Buddhism and Non-Violence Public Talk အခမ်းအနားတွင်
မီဒီယာတစ်ခုမှ မေးမြန်းချက်ကို ဒေါက်တာ တင်မောင်သန်းက ဖြေကြားရာတွင် အထက်ပါ အတိုင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိင်ငံတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား ၉၆၉ ဂိုဏ်းဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်များက အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများ ယခုနှစ်အတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့မီဒီယာများကမှု နှစ်ဘက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားသည် ပာုရေးသားဖေါ်ပြသည်။ မြန်မာနိင်ငံတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးနောက် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ဆယ်ဂဏန်း ၀န်းကျင်ခန့် သေဆုံးမှု၊ ရိုက်နှက်ခံရမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းက်ို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် မီဒီယာများတွင် မလေးရှားရောက်မြန်မာများ အကြမ်းဖက် ခံနေရသည်ပာု ရေးသားဖေါ်ပြသည်။
မြန်မာနိင်ငံတွင် ယမန်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တောင်ကုတ်လူသတ်ပွဲ၊ ရိုပာင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ကာ တိုက်ခိုက် ဖိနှိပ်မှု၊ မိတ္ထိလာမြို့တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဘာသာရေးကျောင်းသား ၃၂ ဦး နှင့်မွတ်စ်လင်မ် ၄၀ နီးပါးအား သတ်ဖြတ်ကာ မွတ်စ်လင်မ် အိမ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှု အပါအ၀င် ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ဥက္ကံမြို့၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ နတ်တလင်းမြို့၊ အုတ်ဖိုမြို့၊ မင်းလှမြို့၊ ပုတီးကုန်းမြို့ စသည့်မြို့များနှင့် အဆိုပါဒေသများ အတွင်းမှ ရွာများ၊နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့တို့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်မှုများကို ဗုဒ္ဓဘာသာရေး အစွန်းရောက် ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၉၆၉ ဂိုဏ်းနှင့် ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မလေးရှားနိင်ငံတွင် မြန်မာနိင်ငံသားများ အကြမ်းဖက်ခံနေရကြောင်း သတင်းဖေါ်ပြချက်များအရ ဆယ်ဂဏန်းမပြည့်သည့် မြန်မာနိင်ငံသားများ မလေးရှားတွင် သေဆုံးမှု၊ ရိုက်နှက်ခံရခြင်းများ ရှိကြောင်းသိရသည်။
Posted: 12 Jun 2013 12:44 AM PDT
CLICK HERE to read all about the healthy greens that can help you to lose weight.
မလေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အသတ်ခံရတာကို ကိုရဲရင့်မရှုတ်ချဘူးလား
လို့ယဉ်ကျေးစွာမေးမြန်းလာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ဟေ့ရောင် မ…ကုလား၊ မလေး
မှာတို့မြန်မာတွေ အသတ်ခံနေရတာကျတော့ ….မို့လို့မင်းမပြောတာလား၊
@x%^#! +-@x%^#! +- ပြောတဲ့ အရိုင်းအစိုင်း မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလေးတွေ
သိအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဥပဒေမဲ့ မတရားသတ်ဖြတ်ခံရတာကို မပြောနဲ့၊
မတရားကြည့်ခံရတာကို တောင် ရှုတ်ချတတ်တဲ့ ဗီဇမျိုး မွေးကတည်းကပါ
လာပြီးသားပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမတွေ ကို ကျိုးနွံတဲ့ သူဖြစ်လေ
တော့ မတရားမှု ကို ရွံမုန်းတတ်တဲ့စိတ် က အထွဋ်အထိပ်မှာ ကို ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မလေးမှာ အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကို ရှုတ်ချပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဗလီတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီး၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကို
စော်ကား၊ လူမမယ် ကလေးတွေ၊ အပြစ်မဲ့တွေ ကို မတရားသတ်ဖြတ် စတဲ့
အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကို မလေး ကိစ္စ ရှုတ်ချတာထက် ၁၀ ပြန် ရှုတ်ချပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အခြေအနေချင်း က မတူဘူး။ ဟိုမှာ က ပုန်းလျှိုး
ကွယ်ရှိုး၊ ရဲတွေလစ်တဲ့အချိန်၊ ဒီမှာ က ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရဲတွေရှေ့မှာတင်။
ဟိုမှာ က သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ကို ဘယ်သူမှ မထိဘူး။
ဒီမှာ က ဗလီတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ ကို အပျော်တမ်းလို မီးရှို့ဖျက်ဆီး
နေတာ။ အခြေအနေချင်း ယှဉ်ပြရရင် မတူတာတွေ နောက်ထပ်အများကြီး
ရှိသေးတယ်။ တော်လောက်ပြီ။ ရင်ထဲက ရိုးသားတဲ့ဆန္ဒ တစ်ခုကို ပြောပြ
လိုက်မယ်။ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဝင် တွေ ဖြစ်ဖြစ် မတရားမှုပြုခြင်း၊
ပြုခံရခြင်း က နေ ကင်းဝေးပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။
Posted: 12 Jun 2013 02:33 AM PDT
"Kita ada gambar sebagai membuktikan tindakan ini. Mengikut undang-undang beg peti undi tidak dibenarkan dibuka ketika pegawai SPR sedang membawanya," katanya.
Posted: 12 Jun 2013 12:33 AM PDT
Posted: 11 Jun 2013 11:28 PM PDT
အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းချင်ရင်တော့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရဲရမယ် ရှာဖွေတတ်ရမယ် ဖော်ထုတ်ရဲရမယ်…..
ဘာသာတရားတခုက သူတို့ ဘုရားစာထဲမှာ ကျိန်ဆဲ ဖို့ သတ်ဖြတ်ဖို့ စိုးမိုးဖို့ ဖော်ပြထားပြီး နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်နေတယ်လို့ ထင်နေရင် သေချာလေ့လာကြည့် ဖို့ လိုလိမ့်မယ် ….အဲ့ဒီ့ ကျမ်းစာအုပ်ဟာ ဘာသာစကားပေါင်း ဘယ်လောက်ထိဘာသာပြန်ထားသလည်း ဘယ်သူတွေလေ့လာဖူးကြသလည်း တကမ္ဘာလုံးက လူတွေက ဒီလိုကျိန်ဆဲမှုတွေပါဝင်တာကို ရွတ်ဖတ်နေတာကို မသိနိုင်လောက်အောင်ညံ့ဖျင်းနေကြတာလား..ကိုယ်တိုင်ကရော တကယ်လေ့လာဖူး လား ..သေချာလေ့လာကြည့်ပါ …လေ့လာခဲ့လို့ အဲ့လိုတွေမပါဝင်ခဲ့ရင် ဝါဒဖြန့် စော်ကားနေတဲ့ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ဝေဖန်ထောက်ပြရဲသလား အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သလား..
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဖူး လို့ နေလို့မရတော့ပါဖူး ပြဿနာက လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေးကို ထိခိုက်လာနေပါပြီ..အခုဆို မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို စုပြီး အကုန်ခံပြီး မလေးမှာသွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့…"ငါတို့ ဘာလုပ်ရမလည်းကွာ ဒီမှာရတဲ့လခ မျိုး မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူကပေးနိုင်မလည်း ငါက ပညာတတ်လည်းမဟုတ် အရင်းအနှီးလည်းမရှိ ငါ့မိဘတွေကို ဘာလုပ်ကျွေးရမလည်း "….စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဖူး …ဒီမှာ လူကြီးပိုင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး အချောင်စားနေတဲ့ကောင်တွေ ဆန်ကုန်မြေလေး မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေက ပြန်လာခဲ့ လို့ကြွေးကြော် နေတယ်..မင်းတို့ စကားတခွန်းနဲ့ ဟိုကလူတွေရဲ့ ဘဝ တခုကို မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့…. ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ မသိနိုင်လောက်အောင် မညံ့ဖျင်းကြပါနဲ့တော့ အမှန်တရားကို လက်မခံရဲလောက်အောင် မနုံချာကြပါနဲ့တော့..အကြောင်းအရာတခု ဝါဒဖြန့်နေတာကို ဟုတ်မဟုတ်လေ့လာပါ …မဟုတ်ရင်မမှန်ရင် ရှုတ်ချပါ..တားဆီးပါ..အခုလောလောဆယ် မလေးရှားမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးမရှိလို့.. နိုင်ငံတွင်းက ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့မြို့တွေမှာ နေတဲ့ ဆွေးမျိုးသားခြင်းမရှိလို့ ဘာဒုက္ခမှ မခံစားရသေးဖူး ဆိုရင်တောင် …တချိန်ချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့ဆီ သေချာပေါက်ကူးစက်လာနိုင်တာ သေချာနေပြီလေ…ဒီလို ပြဿနာမျိုးကြီးတွေကြားမှာ ခင်ဗျားတို့ သားသမီး မျိုးဆက်သစ်တွေကို ထားရစ်ခဲ့နိုင်သလား ..နိုင်ငံတွင်းမှာနေတဲ့ ဘာသာမတူတဲ့လူ ခြောက်သန်း လောက်ကို ကုန်အောင်သတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ရော ယုံကြည်နေသလား…ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီး တရုပ်နိုင်ငံတခုတည်းနဲ့ ဆက်ဆံရုံနဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ ရောထင်သလား..
လူ လို တွေး ကြည့် ကြ ပါ…..
Posted: 11 Jun 2013 10:30 PM PDT
Posted: 11 Jun 2013 10:23 PM PDT
Please report this to Malay gov. as defaming our beloved PM of Malaysia YAB Datuk Sri Haji Najib Tun Razak.
This is done by the assistants of present Deputy Information Minister U Ye Htut and former Information Minister Kyaw San.
Malaysia gov should detain them as the bargaining chip… Now Myanmar Gov is using the lame excuse as the "INTERNAL PROBLEM, others could not interfere" in the Genocide and Persecution of Muslims. Now these Buddhist prisoners are the INTERNAL AFFAIR of Malaysia where they committed crime in Malaysia. We hereby request the Malaysian Government to kindly use this to bargain for the welfare and safety of Muslims in Myanmar.
Posted: 11 Jun 2013 11:36 PM PDT
Kelima-lima dilihat oleh ahli strategi "bilik perang" Najib mempunyai peluang terbaik untuk menang membantu gabungan pemerintah itu mendapatkan semula majoriti tradisi dua pertiga di Parlimen yang mereka hilang semasa Pilihan Raya 2008.
Akan tetapi sesetengah veteran parti telah menyalahkan prestasi kurang memberangsangkan parti itu dan BN kepada ahli strategi "bilik perang" Najib, dan memberikan petunjuk perdana menteri mungkin ditunjukkan pintu keluar jika tidak menyingkirkan ahli strateginya kerana nasihat buruk.
12/06/2013 | 12:09 AM
British Member of European Parliament, Sajjad Karim
BRUSSELS, June 11 (KUNA) — A British Member of European Parliament, Sajjad Karim, Tuesday said he has drafted and signedacrucial European Parliament resolution, which calls for an end to discriminatory policies against the Rohingya Muslim minority in Myanmar/Burma.
The resolution, which will be voted on Thursday, calls on Burma's neighbours to come to the aid of the one million refugees and to put pressure on the Burmese government to end policies such as the two child regulation.
Karim inastatement said that the Muslim minority in Myanmar/Burma, termed by the UN as one of the most persecuted minorities on the planet, have been subject to repeated anti-Muslim attacks since the country's military rule in 1962.
There have been many shocking instances of the army being involved in killing, raping and torturing the Rohingya Muslim population.
Since the election of President Thein Sein in March 2011, sectarian violence has erupted with the situation of the Rohingya Muslims further exasperated by the persistent denial of basic human rights and discriminatory laws which has resulted in the government expelling the community, he noted.
The Rohingya Muslims are classed as 'stateless' due to the Burmese government's refusal to recognise the minority.
"I am seeking to reassure the Rohingya Muslim community that their plight is not forgotten. My colleagues and I in the EU are working tirelessly to ensure that enough aid is being sent and distributed to the refugee camps, and that political pressure is being exerted on the government of Burma," said Karim.
An estimated one million Rohingyas have left the country, with 300 000 to Bangladesh alone.
"I strongly believe that Burma's neighbours such as Bangladesh, India and Thailand need to step up and show leadership in facilitating an equitable solution. This humanitarian crisis has no place in our world," he added.
The EU recently provided 5.5 million euros to the displaced people in Burma and is working with UN agencies to distribute food and supplies to the Rohingya community. (end) nk.bs KUNA 120009 Jun 13NNNN